‘Mirehitra i Delhi’: 17 no maty ary an-jatony no naratra nandritra ny fifandonana tamin’ny hetsika manohitra ny lalànan’ny zom-pirenena · Global Voices teny Malagasy
‘Mirehitra i Delhi': 17 no maty ary an-jatony no naratra nandritra ny fifandonana tamin'ny hetsika manohitra ny lalànan'ny zom-pirenena
Nangataka ny Delhita rehetra ny Lehiben'ny Minisitra hitandro ny filaminana
Voadika ny 09 Marsa 2020 3:17 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Italiano, Français, English
Mponina nanao fihetsiketsehana nanohitra ny Fanitsiana ny Lalànan'ny Zom-pirenena sy ny Rejisitry ny Olom-pirenena. Sary tao amin'ny Wikipedia avy amin'ny DoiplomatTesterMan. CC BY-SA 4.0
Nivadika nahery vaika ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny ankilany niady hevitra momba ny zom-pirenena nanomboka ny 23 Febroary 2020 tany amin'ny distrika avaratra-atsinanan'ny renivohitr'i India. Mbola mitohy ny fihetsiketsehana ary nanomboka nivadika ho korontana nanomboka tamin'izay. Nifanandrify tamin'ny fitsidihan'ny Filoham-pirenena Amerikana Donald Trump tao amin'ny firenena ny fifandirana ary nitarika ny fahafatesan'ny sivily Miozolomana sy Haindò miisa 17 farafahakeliny, anisan'izany ny polisy iray. Maherin'ny 150 ny olona naratra, maro tamin'izany no naratra tamin'ny tifitra izay nolazain'ny mpanao fihetsiketsehana fa avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana mpanohana ny CAA. Fiantsonan'ny metro miisa dimy sy sekoly vitsivitsy no mbola mikatona any Avaratra Atsinanan'i Delhi. Mbola mitohy ity fihetsiketsehana manohitra ny Fanitsiana ny Lalànan'ny Zom-pirenena (CAA) izay nanomboka ny volana Desambra 2019 ity eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena.
Vakio bebe kokoa: Death toll reaches 27 in India's citizenship protests
Hatrany Shaheen Bagh ka hatrany Jaffrabad
Tamin'ny 22 Febroary, manodidina ny 200 ny vehivavy nivory teo akaikin'ny garan'ny metro Jaffrabad any Avaratra Atsinanan'i Delhi ary nanomboka nanao fitokonana manohitra ny Lalanan'ny Rezisitry ny Olom-pirenena (NRC) sy ny (Fanitsiana) ny lalànan'ny Zom-pirenena (CAA). Nosakanan'ny mpanao fihetsiketsehana ny fidirana tao amin'ny garan'ny metro sy ny làlana mifanakaiky teo, hetsika izay nampitoviana tamin'ny fihetsiketsehana am-pilaminana Shaheen Bagh izay mitranga any amin'ny faritra hafa any Delhi. Nitondra sainam-pirenena ary niantsoantso ny teny faneva hoe “Azaadi (fahafahana) avy amin'ny CAA, NRC ” teo anoloan'ny polisy ireo vehivavy tao Jaffrabad.
Nakatona ny fidirana sy ny fivoahana tao Jaffrabad. Tsy afaka hijanona ao amin'io gara io ny lamasinina.
Vakio bebe kokoa: Na teo aza ireo antso fanentanana, mankahatra ny lalàna mikasika ny maha-olompirenena ny fihetsiketsehana iray tarihan'ny vehivavy ao India [mg]
Nihabetsaka ny vahoaka tamin'ny 23 Febroary raha nisy fihetsiketsehana avy amin'ny mpanohana ny lalàna vaovao momba ny zom-pirenena notarihan'i Kapil Mishra, mpitarika ny antokon'ny fitondrana Bharatiya Janata (BJP) ao an-toerana. Voalaza fa nanome “fe-potoana farany” ho an'ny polisy tao Delhi i Misra mba hanokatra ny lalana nosakanan'ny mpanao fihetsiketsehana.
Namoaka fampitandremana ny mpitarika ny antoko eo amin'ny fitondrana narahin'ny polisy iray. Tsy nisy nanohitra azy – na ny polisy na ny antokony. 24 ora aty aoriana, nitombo ny herisetra tany atsinanan'i Delhi, toa reraka ihany ny polisy.
Nanomboka ny fifandonana rehefa nodarohana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny CAA ka samy nifampitoraka vato ny andaniny roa. Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso ny polisy mba hifehezana ny fifandonana.
Na izany aza, nitohy ny fifandonana ny ampitson'iny satria nisy tranganà herisetra vaovao tany amin'ny faritra be mponina Miozolomana teo akaiky teo.
Mirehitra i Delhi, izany no tadiavin'ny governemanta.
Nataon'ny elatra havanana ho faritry ny ady i Delhi!
#DelhiViolence | Hindu mobs are throwing petrol bombs across the road at Muslim houses in Kabir Nagar.
Nitoraka cocktail molotov manerana ny arabe misy ny tranon'ireo Miozolomana ao Kabir Nagar ireo vahoaka Haindò.
Nitantara ny zava-misy tamin'ny herisetra tao amin'ny lahatsoratry ny First Post ilay mpanao gazety Vijayta Lalwani:
Rehefa nirehitra ny fivarotana iray tao amin'ny faritr'i Delhi ao Maujpur, ny alatsinainy tolakandro dia nisy lehilahy lehibe iray nitondra sora-baventy nosoratana jaky teo amin'ny handriny ary namerimberina nitaky ny mpanao gazety mba tsy haka sary intsony ny fandoroana fananana. “Bade dinon to baad Hindu jaaga hai,” hoy izy. “Nifoha ny Haindò rehefa afaka fotoana ela.” Tsy nampiseho ny endriny izy fa niseho ho mpanohana ny Fanitsiana ny Lalànan'ny Zom-pirenena fotsiny. [..]
“Polisy dimy no nameno vato tao anaty bajaj ary nandefa izany tany [Maujpur Chowk],” hoy i Kazim, 30 taona monina ao Jaffrabad. “Firaisana tsikombakomba.” Nilaza izy fa miandany amin'ny mpanohana ny CAA ny mpitandro filaminana ary nanome fitaovam-piadiana azy ireo ho an'ny fifandonana manaraka.
Nanadihady ny mpanao fihetsiketsehana iray mpanohana ny CAA/NRC izay niaiky fa nandoro fasan'ny maherifo i Srishti Srivastava ao amin'ny The Wire.in:
Tamin'ny alàlan'ny fefy tariby ihany no nidiran'izy ireo (izany hoe ny Miozolomana) tao (India). Isao fotsiny izy ireo. Hainao ny momba ny fanisam-bahoaka; tsy tokony ho maro izy ireo eto. Farafahakeliny ny antsasak'ireo izay nipetraka (tany amin'ny toerana nisy ny fihetsiketsehana) dia niditra tao (India) tamin'ny alàlan'ny fefy tariby (izay midika fa tsy ara-dalàna).
Vakio bebe kokoa: In Modi's India, anti-Bangladeshi-immigrant rhetoric is used to justify changes in citizenship laws
Tamin'ny 25 Febroary, nitatitra ny Al Jazeera fa nisy namotika ny moskea iray. Nodorana ihany koa ireo magazay sy fiara anisan'izany ny kamiao mpamono afo tao Jaffrabad sy Maujpur .
Vaovao farany Ashok Nagar, Delhi tamin'ny 6 ora hariva: norobain'ny mpampihorohoro Hindutva ny moske raha niverina nijery indray ny tetikadiny tamin'ny fanapotehana tsy nisy henatra izy ireo. Nahita izahay fa tsy nisy na inona na inona nataon'ny polisy tao Delhi, ny HMO India, ny PMO India sy ny arvindkejriwal.
Tena tsy milamina ny toe-draharaha ao Yamuna Vihar. Hitanay ny fihetsik'ireo andian-dehilahy nirongo hazo sy vato. Nisy ny fandoroana fananana. Nosakanana tsy haka sary izahay. Renao any amin'ny faran'ny lahatsary ny olona miteny izany.
Nanome fialofana ho an'ireo fianakaviana Miozolomana izay nandositra ny vahoaka Hindutva tany NE Delhi ny Gurdwara.
(Tsy nomena ny toerana tena nisy azy ireo satria mety hampidi-doza ny Sikhs ihany koa izany. Ho lazainay amin'ny hafatra mivantana [DM] raha toa ka mila mandeha any ny olona)
Nanameloka ny herisetra ny Lehiben'ny Minisitra ao Delhi Arvind Kejriwal ary nangataka ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta ao an-toerana sy ny vahoaka mba hitandro ny filaminana izy. Nilaza ihany koa fa tsy ampy ny polisy ao Delhi hamehy ny herisetra.
Nizara ny heviny tao amin'ny tambajotra sosialy ny olona:
Tsy misy mpanao fihetsiketsehana mila korontana. Tsy misy mpanakorontana mila fihetsiketsehana.
Look at ‘em. How old they could be? The seeds of communalism & hatred sown by Hindutva terrorists, took them out on the streets with bludgeons! This brain-dead generation will decide who will rule our nation! Detox them, get them back, else we're doomed forever #DelhiBurning pic.twitter.com/PEJuejqHWZ
Jereo ireto. Firy taona izy ireo? Ny voan'ny komonalisma sy ny fankahalana nafafin'ireo mpampihorohoro Hindutva, nitondra azy ireo teny an-dalambe niaraka tamin'ny vata-kazo! Ity taranaka maty eritreritra ity no hanapa-kevitra hoe iza no hitondra ny firenentsika! Diovy amin'ny fanapoizinana izy ireo, esory izy, fa raha tsy izany ho ratsy fiafara isika.
Yes this is @BJP4India MLA abhay verma from Laxmi Nagar#DelhiBurning https://t.co/zyirEB503T
Ity no horonantsary mampatahotra indrindra hitako androany. Ratsy noho ny famonoan'olona tena izy rehefa nangataka ny vahoaka hitifitra ao anaty korontana ny parlemantera voafidy tao amin'ny antokon'ny fitondrana.
Eny izy no parlemantera BJP4India MLA abhay verma mpikambana ao amin'ny Laxmi Nagar
Sadly there is no happiness in the streets outside, as the CentralGovt condones violence unleashed by its own supporters, & the StateGovt wrings its hands helplessly, claiming that cheap water& electricity are more important than lives, principles or social harmony. #DelhiBurning https://t.co/9eevU7IJ6Y
Mampalahelo fa tsy misy fahasambarana eny an-dalambe any ivelany, satria mankatoa ny herisetra ataon'ny mpanohana azy ny governemanta foibe ary mijery fotsiny ny fanjakana ary milaza fa mbola zava-dehibe kokoa ny rano sy herinaratra mora vidy noho ny aina, ny fitsipika na ny firindran'ny fiarahamonina.
Manavao mivantana ny vaovao momba ny fihetsiketsehana ny First Post sy ny The Times Of India.
Vakio ny fitantaranay manokana Iza no hizaka ny vokan'ny demokrasia mitotongana ao India? raha mila fanazavana fanampiny momba ny fihetsiketsehana manohitra ny lalànan'ny zom-pirenena ao India.